Raspberry Pi vs Servers NAS: Izay rehetra ilainao ho fantatra | Fitaovana maimaim-poana
Raspberry Pi vs Servers NAS: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Raha mieritreritra ianao mampiasa mpizara NAS, avy eo dia tokony ho fantatrao fa manana safidy maromaro eo am-pelatananao ianao. Manomboka amin'ny fampiasana Raspberry Pi misy fitaovana fitehirizana sasany, na ilay karatra SD tenany na fahatsiarovana USB ivelany, namboarina ho serivisy fitehirizana tambajotra, hatramin'ny fampiasana serivisy fitahirizana rahona avy amin'ny mpamatsy iray, toy ny fampiantranoana elastika avy amin'ny Webempresa, amin'ny alàlan'ny fitaovana Vahaolana NAS.
Toy ny a tranonkala servidor, Serivera NAS mety hahasoa indrindra izy ireo ankehitriny. Na hitahiry angona azonao idirana avy amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra, hampiasa ireo ho an'ny backup na kopia backup, toy ny tahiry multimedia anao manokana, sy ny maro hafa. Ny fahaizan'ny rehetra dia ambony indrindra, fa tokony hianaranao bebe kokoa momba ny vahaolana efa misy mba hahafahanao misafidy ny tsara indrindra amin'ny filanao ...
1 Inona no atao hoe mpizara?
1.1 Ahoana ny fametrahana mpizara
1.2 Karazana mpizara
2 Serivera NAS: izay rehetra tokony ho fantatrao
2.1 Inona no azoko atao amin'ny NAS?
2.2 Ahoana ny fomba hisafidianana ireo mpizara NAS tsara indrindra?
3 Raspberry Pi: ny Swiss Army Knife ho an'ny mpanamboatra
3.1 Tombony sy fatiantoka an'ny Raspberry Pi mifanohitra amin'ireo mpizara NAS natokana
Inona no atao hoe mpizara?
Zava-dehibe ny fahalalana inona ny mpizara Fantatrao koa fa tsy izy rehetra dia ao amin'ny foibe angon-drakitra marobe, fa azonao atao koa ny mampihatra izany amin'ny PC anao, amin'ny Raspberry Pi anao, ary na amin'ny finday aza.
Amin'ny computing, server dia tsy misy afa-tsy solosainana inona na inona habeny sy heriny. Ity solosaina ity dia ahitana ny ampahany ilaina amin'ny fitaovana rehetra, ary koa ny rafitra fandefasana sy rindrambaiko izay manome serivisy (avy eo ny anarany). Ohatra, azonao atao ny manana mpizara NAS natokana ho an'ny fitahirizana tambajotra, mpizara tranonkala hampiantrano pejy, mpizara fanamarinana sns.
Na inona na inona serivisy omen'ny mpizara, hisy fitaovana hafa hifandray aminy handray soa avy amin'ny serivisy omeny (maodely server-client). Ireto fitaovana hafa ireto dia fantatra amin'ny anarana hoe client ary mety koa avy amin'ny smartphone, Smart TV, PC, sns.
Ahoana ny fametrahana mpizara
Ny maodelin'ny client-server dia foto-kevitra tsotra izay hiandrasan'ny mpizara hatrany ny mpanjifa na ny mpanjifa hangataka. Saingy hoy ny mpizara azo ampiharina amin'ny fomba isan-karazany:
Shared: matetika dia entina ilazana fampiantranoana, na fampiantranoana Internet, zaraina. Izany hoe, toerana misy tranokala marobe fampiantranoana ary matetika tompon'ny trano samy hafa. Izany hoe, mizara ny fitaovan'ny mpizara (RAM, CPU, fitehirizana ary ny fantsom-pifandraisana).
tombontsoa: mazàna izy ireo dia mora kokoa rehefa zaraina amin'ny hafa. Tsy mila fahalalana teknika avo lenta ianao, fa mora ny manomboka.
fatiantoka: tsy dia mora ampiasaina ary ho an'ny fampiharana sasany dia mety tsy ho hitanao ny tsy fifehezana. Raha zaraina dia mety tsy ny tsara indrindra no tombony azo.
Fa inona? Izy ireo dia mety ho tsara amin'ny bilaogy na tranokala fanombohana miaraka amin'ny fitsidihana latsaky ny 30.000 isam-bolana. Na dia ho an'ny vavahady orinasa kely aza.
VPS (Virtual Private Server): lasa be mpitia izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia solosaina "miely" amin'ny mpizara virtoaly isan-karazany izy io. Izany hoe, milina ara-batana iray izay zaraina amin'ireo milina virtoaly maro ny loharano. Izany dia mamela azy ireo hanelanelana ny fizarana sy ny voatokana. Izany hoe, ny mpampiasa tsirairay dia afaka manana rafitra fiasa ho an'ny tenany sy loharano (vCPU, vRAM, fitehirizana, tambajotra) izay tsy hizaran'izy ireo amin'ny olon-kafa, afaka hitantana ny VPS toa ny iray manokana.
tombontsoa: manome fitoniana sy fahitsiana. Hanana fidirana amin'ny root amin'ny mpizara (amin'ny drafitrao) ianao. Azonao atao ny mametraka na mamono ny rindranasa tianao. Raha ny vidiny dia mora vidy kokoa noho ny natokana izy ireo.
fatiantoka: ny fitantanana, ny fametahana ary ny fiarovana no ho adidinao. Raha misy ny olana dia tsy maintsy hamaha azy ireo ianao, noho izany dia mila fahalalana teknika lehibe kokoa noho ianao zaraina. Na dia marobe kokoa noho ny nizara aza izy, dia mbola misy fetrany ihany raha oharina amin'ilay voatokana.
Fa inona? Tsara ho an'ny orinasa madinidinika sy salantsalany izay te-hampiantrano ny tranonkalany na ny serivisy omeny.
Nanokan-tena: ao amin'izy ireo no hifehezana ny tontolo iainana, tsy misy "mpiara-monina manelingelina". Midika izany fa hanana ny masinina ho anao ianao, afaka mitantana izany na izany aza tianao ary manangana fotodrafitrasa ilainao.
tombontsoa: tena azo ekena, fidirana feno ary fifehezana ny mpizara, manome antoka ny fisian'ny loharano rehetra ho anao, manatsara ny fiainana manokana sy ny filaminana, fahombiazana azo antoka ary azo vinavinaina.
fatiantoka: lafo kokoa izy ireo ary mila loharanom-pahalalana teknika hitantanana azy ireo. Mila fikojakojana tsy tapaka izy ireo.
Fa inona? Mety ho an'ny fampiharana tranonkala, tranokala eCommerce, ary serivisy izay hanana fivezivezena be.
Tenanao manokana: ireo teo aloha dia mpizara iray natolotry ny orinasa rahona. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny manana mpizara anao manokana. Mety hanana tombony lehibe izany, satria ianao no tompon'ny fitaovana, manatsara ny fiainana manokana sy fiarovana ny angon-drakitrao. Mba hanananao mpizara anao manokana dia azo tanterahina izany, araka ny efa noresahiko teo aloha, amin'ny fampiasana PC, fitaovana finday, ary na dia Raspberry Pi aza. Mazava ho azy fa raha mila zavatra matanjaka noho ianao ianao dia tokony mividy mpizara toy ny nomen'ny orinasa toy ny HPE, Dell, Cisco, Lenovo, sns., Hamoronana "foibe data" anao manokana, na inona na inona habe ...
tombontsoa: ianao no tompon'ny mpizara, noho izany dia hanana fifehezana feno ianao. Na dia scaling na fanoloana singa hardware aza.
fatiantoka: tsy maintsy hikarakara ireo fahasahiranana rehetra mety hitranga ianao, fanamboarana, fikojakojana sns. Ankoatr'izay dia misy fiakarana vidiny, na ny fividianana ireo fitaovana ilaina sy ny fahazoan-dàlana ilaina, ary koa ny fanjifana herinaratra mety hananan'ny milina, ary ny fandoavana ny IPS raha mila broadband haingana ianao.
Fa inona? Mety ilaina amin'ny fikambanana, orinasa, ary governemanta mila fanaraha-maso tanteraka ny angona izany, na ho an'ireo mpampiasa te-hametraka zavatra tena miavaka ary tsy hamela ny angon-drakitra hataony eo am-pelatanan'ny hafa.
Mety misy variants ao anatin'ireny, indrindra ho an'ireo serivisy sy fotodrafitrasa omen'ny mpamatsy sasany ankehitriny, toy ny serivisy fitantanana ka tsy mila miahiahy momba na inona na inona ianao, vahaolana fiarovana, installer tsotra hametrahana rafi-pandaminana na rindrambaiko tsy misy fahalalana sns.
Ao amin'ny fizarana teo aloha dia afaka nahafantatra ny fomba fampiharana mpizara ianao, na izany aza, azo atao katalaogy ihany koa izy ireo miankina amin'ny karazana serivisy nindrana:
Mpizara tranonkala: Malaza be ity karazana mpizara ity. Ny asany dia ny fampiantranoana sy fandaminana pejin-tranonkala mba hahafahan'ny mpanjifa, miaraka amina tranokala na crawlers, afaka miditra ao amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny protokol toy ny HTTP / HTTPS.
Mpizara lozisialy: ireo izay ampiasaina hitahiry ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo mampakatra na alaina amin'ny tamba-jotra. Ao anatin'ireto mpizara ireto dia misy karazany maro, toy ny mpizara NAS, mpizara FTP / SFTP, SMB, NFS, sns.
Mpizara mailaka: ny serivisy omen'izy ireo dia ny fampiharana ireo kaonty mailaka hahafahan'ny mpanjifa mifampiresaka, mandray na mandefa mailaka. Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko hampihatra protokol toy ny SMTP, IMAP, na POP.
Mpizara lozisialyNa dia azo atao katalaogy aza izy ireo ao anaty rakitra, ity karazana ity dia mitahiry fampahalalana amin'ny fomba hierarchical sy milamina ao anaty tahiry. Ny rindrambaiko sasany hampiharana tahiry dia PostgreSQL, MySQL, MariaDB, sns.
Mpizara lalao: dia serivisy natokana manokana hanomezana izay ilaina ho an'ny mpanjifa (gamer) hahafahany milalao amin'ny fomba multiplayer an-tserasera.
Mpizara proxy: manompo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny tambajotra. Miasa amin'ny maha mpanelanelana azy izy ireo ary azo ampiasaina hanivanana ny fifamoivoizana, hifehezana ny fantsom-pifandraisana, fizarana entana, cache, fanonerana anarana, sns.
DNS server: ny tanjony dia ny manome serivisy famahana anarana anarana. Izany hoe, mba tsy mila tadidinao ny IP an'ny mpizara tianao hiditra, zavatra mankaleo ary tsy dia mailaka loatra, dia tsy hampiasa ny anaran'ny mpampiantrano (domain sy TLD) fotsiny ianao, toy ny www.example, es , ary ny DNS server dia hitady ny tobim-baovaon'izy ireo ho an'ny IP mifanaraka amin'ilay anaran'ny sehatra ahafahana miditra.
Server mpamaritra fanamarinana: manome serivisy ho an'ny fidirana amin'ny rafitra sasany izy ireo. Matetika izy ireo dia mirakitra angona-tahiry misy ny mari-pahaizana momba ny mpanjifa ary. Ohatra iray amin'izany ny LDAP.
ny hafaMisy ny hafa, ankoatr'izay, serivisy fampiantranoana maro no manolotra fitambarana maromaro amin'ireny. Ohatra, misy toeram-ponenana manome anao data, mailaka, sns.
Serivera NAS: izay rehetra tokony ho fantatrao
ny Mpizara NAS (Network Attached Storage) mpizara fitaovana fitahirizana tambajotra mifamatotra izy ireo. Amin'izany ianao dia afaka manana fitaovana hampiantranoana data ary hanananao azy amin'ny fotoana rehetra. Ity karazana mpizara ity dia azo ampiharina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko amin'ny fitaovana marobe, toy ny PC, fitaovana finday, Raspberry Pi, mandoa serivisy fitehirizana rahona, ary na dia mividy ny NAS-nao aza (izay hifantohako amin'ity fizarana ity ).
Ireo mpizara NAS ireo dia hanana ny CPU, RAM, fitehirizana (SSD na HDD), Rafitra I / O, ary ny rafitra fiasao. Ho fanampin'izany, eny an-tsena dia afaka mahita mifantoka amin'ny mpampiasa an-trano ianao, ary ny hafa ho an'ny tontolon'ny orinasa manana fahaiza-manao sy fahombiazana lehibe kokoa.
El fampandehanana amin'ireo mpizara ireo dia tsotra takatra:
rafitra: Ny serivera NAS dia manana fitaovana sy rafitra fikirakirana izay hampandeha mangarahara ny mpanjifa amin'ny mpanjifa. Izany hoe, rehefa manapa-kevitra ny handefa, hamafa, na hampidina angon-drakitra ny mpanjifa dia hikarakara ireo dingana rehetra ilaina amin'izany izy, manolotra interface tsotra amin'ny client.
fitehirizana: azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny slot samihafa. Isaky ny slot dia azonao atao ny mampiditra fampitaovana fitahirizana hanitarana ny fahaizany, na HDD na SSD. Ireo kapila mafy mifanentana dia mitovy tanteraka amin'ireo ampiasainao amin'ny PC mahazatra anao. Na izany aza, misy andiana manokana ho an'ny NAS, toy ny Western Digital Red Series, na ny Seagate IronWolf. Raha mila sehatr'asa ianao, dia manana WD Ultrastar sy Seagate EXOS ihany koa.
Red: Mazava ho azy, raha azo idirana amin'ny mpanjifa, dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tamba-jotra izy io. Na amin'ny alàlan'ny Ethernet cabling na amin'ny alàlan'ny teknolojia tsy misy tariby.
Inona no azoko atao amin'ny NAS?
Ny fananana mpizara NAS dia ahafahanao manana 'rahona' fitehirizan-tany manokana, izay mety hisy tombony lehibe. Eo anelanelan'ny fampiharana naseho Izy ireo dia:
Amin'ny maha-medium fitehirizana tambajotra azy: azonao atao ny mampiasa azy io hitahiry izay rehetra ilainao, ohatra, tehirizo amin'ny findainao ny sarinao, ampiasao ho galeriana an-tserasera misy rakitra multimedia, serivisy mivantana anao toa an'i Netflix mampiantrano ireo sarimihetsika tianao sy andian-tantara (afaka mitantana an'io i Plex , Kodi,…), Sns.
Bakup: afaka manao kopia backup amin'ny rafitrao amin'ny NAS amin'ny fomba tsotra ianao. Amin'ity fomba ity dia hanana backup foana eo amin'ny rantsan-tananao ianao ary hanome toky ianao fa ao anaty mpizara fantatra ny angonao.
anjara: azonao ampiasaina hizarana ny rakitra isan-karazany amin'ny namanao sy ny fianakavianao, na amin'izay tianao. Ampidiro fotsiny izay tianao zaraina ary afaka manome alalana amin'ny mpanjifa hafa ianao hahafahan'izy ireo miditra na misintona azy.
fampiantranoana: azonao atao koa ny mampiasa azy ho mpampiantrano hitahiry ny tranokalanao any. Na izany aza, tadidio fa ny serivera NAS dia voafetra amin'ny bandwidth an'ny tambajotrao. Izany hoe raha tsy manana tsipika haingana ianao ary miditra amin'ny NAS ny hafa dia hahita fidinana mahavariana ianao. Miaraka amin'ny optika fibre dia mihatsara tanteraka izy io.
ny hafa: Misy ihany koa ireo mpizara NAS izay afaka miasa ho mpizara FTP, hampiantrano tahiry ary misy aza ny mampiditra asa ho an'ny VPN.
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo mpizara NAS tsara indrindra?
Rehefa mividy ny mpizara NAS anao manokana dia tokony hanatrika ny sasany toetra ara-teknika Mba hahazoana antoka fa nahavita nividy tsara ianao:
Hardware- Zava-dehibe ny fanananao CPU manana fahombiazana tsara sy habetsaky ny RAM ho an'ny hakingana bebe kokoa. Hiankina amin'ny fandefasana ity serivisy ity, na dia hiankina kely amin'ny zavatra ilainao manokana aza ny zava-drehetra.
Bays / Storage: tandremo ny isa sy ny karazana bay (2.5 ″, 3.5 ″,…) efa misy ny interface (SATA, M.2,…). Ny mpizara NAS sasany dia manohana ny fametrahana kapila mafy maromaro handrefesana ny fahafaha-manao (1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB,…). Misy ihany koa ireo azo atao ny manamboatra ny rafitra RAID amin'ny fihenan'ny data. Ary tadidio fa zava-dehibe ny misafidy kapila mafy manokana NAS, izay hamboarina mba hanohanana ny entana sy ny fotoana ambony:
Western Digital Mena SSD 2TB 2.5
Fifandraisana amin'ny tambajotra: anton-javatra iray hafa tokony hikajiana hampifandray ny mpizara anao amin'ny mpanjifa amin'ny fomba tsara indrindra.
Rafitra sy fampiharana miasa: ny mpanamboatra tsirairay dia mazàna manome ny rafi-tranony manokana, ary andiana fampiharana sy fiasa manan-tompo. Amin'ny ankapobeny, ny fomba fivezanao amin'ireo menus sy ny safidy anananao eo amin'ny rantsantananao dia miankina aminy. Miovaova arakaraka ny mpamatsy.
Marika tsara indrindra- Ny marika sasany an'ny mpizara NAS tena tsara dia ny Synology, QNAP, Western Digital, ary Netgear. Ny tolo-kevitry ny fividianana sasany dia:
Fifandraisana Western Digital My Cloud Home Ethernet ary hatramin'ny 4TB (ho an'ny trano)
Synology DS720 + 2 Bays (ho an'ireo orinasa madinidinika na mpampiasa mitaky be kokoa)
Bays QNAP 4 ary hatramin'ny 8 TB (ho an'ny matihanina)
Raspberry Pi: ny Swiss Army Knife ho an'ny mpanamboatra
Vahaolana mora vidy ho an'ny mpizara NAS raha tsy mila zavatra lehibe ianao dia ny fampiasana ny SBC anao hampihatra ny iray amin'izy ireo. Ny Raspberry Pi dia mamela anao hanana ny anao NAS mora vidy ao an-trano. Ianao ihany no mila:
Fifandraisana amin'ny Internet.
Mediam-pitahirizana (azonao atao ny mampiasa ny carte de mémoire na fampitaovana fitahirizana USB mifandraika amin'ny Pi anao. Mety ho kapila mafy USB ivelany na pendrive ...
Rindrambaiko hampiharana ny serivisy. Afaka misafidy tetikasa maromaro ianao, na loharano misokatra aza, toy ny ownCloud, NextCloud, sns.
Tombony sy fatiantoka an'ny Raspberry Pi mifanohitra amin'ireo mpizara NAS natokana
Raha manapa-kevitra ny hankafy ny tombony azon'ny mpizara NAS ianao dia tokony handinika ny tombony sy lesoka izay afaka manana ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny Raspberry Pi:
Fianarana mandritra ny fomba fametrahana
Fahasarotana amin'ny fametrahana sy fikojakojana
Mila mampifandray azy io hatrany amin'ny tamba-jotra sy amin'ny herinaratra (fanjifana)
Satria tsy fitaovana NAS natokana ho azy io dia mety hisy olana raha te hampiasa ny SBC amin'ny tetikasa hafa ianao
En famarananaRaha mila serivisy NAS maharitra tsy misy fotony sy mora vidy ianao, ny Raspberry Pi no ho mpiray antoka aminao indrindra ka tsy mila manambola be loatra ianao. Etsy ankilany, ho an'ny serivisy manana fahaiza-mitahiry lehibe kokoa, fitoniana, fanitsiana ary fahombiazana, dia tsara kokoa ny mividy mpizara NAS anao manokana na manakarama serivisy fitahirizana rahona ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Raspberry Pi » Raspberry Pi vs Servers NAS: Izay rehetra tokony ho fantatrao
1n4148: ny momba ny diode tanjona ankapobeny
Fahanterana efa nomanina: ny kanton'ny famitahana mba handanianao bebe kokoa ...